ကစားချင်အခမဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းအကြောင်းသင်ပေးသည်နှင့်သင်တစ်ခုလုံးအသစ်အရအရွယ်ရောက်ယို? ထိုအခါဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳ AHT! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလက်ရှိသုံးစွဲပြီးခဲ့သည့် ၄ နှစ်ချဤလွှတ်ပေးရန်အတူတူကျနော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းအဆိုညမ်းဂိမ္းဝါသနာသွားခံစားရမယုံနိုင်လောက်အောင်မင်္ဂလာနှင့်အတူအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးမှစီမံခန့်ခွဲလုပ်တွင်အချိန်တိုတိုအာကာသ။ ကျွန်တော်ယုံကြည်ကြောင်းကမ္ဘာ့အရှည်လျားပြီးလိုအပ်ပါကတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်းပုံစံပတ်ပတ်လည်ဇာတ်ကောင်ကြိုက်မိန်းမနှင့်ငါတို့သည်ခံရဖို့ကျေနပ်နေတဲ့သူများကြောင့်ချပြီးထွက်ရှိပါတယ်။, သင်သည်လိမ့်မယ်အချစ်ဒီ busty ကျယ်ပြန့်တတ်နိုင်သည်အိပ်ခန်းထဲမှာနှင့်ဤမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်ကစားသင့်ရဲ့ကတ်များကိုအသုံးပြုခြင်း၊အကမယ်တစ်ဦးသဘာဝတိုးတက်မှုမှအိပ်သူမ၏မရှိဘဲမည်သည့်အရေးကိစ္စများသမျှ! အရွယ်ရောက်ပြီးထုတ်လုပ်ယိုအလုပ်လုပ်ပြီဒီဂိမ်းအပေါ်နေ့နှင့်ညဉ့်ကိုအခုႏွစ္ၾသဂုတ္လမွ ၂၀၁၆ နှင့်ကျွန်တော်တို့အရမ်းပျော်ဖို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်စီးခေါင်းစဉ်သင်တို့အဘို့အကြည့်ဖို့။, ပါကကျေးဇူးပြုပြီးမဟုတ်အစမ်းစမ်းသပ်ရန်၊ဖွံ့ဖြိုးရေးအဆင့်အစောပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်ခွဂၤါ:ရတဲ့င်အပြည့်အဝဂိမ်းဒီနေရာမှာနှင့်အတူမိန်းမကြီးမားသော Tits နှင့်ဒါကဲ့သို့ရှည်လျားသင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးချစ်သောသူညစ်ညမ်းဂိမ်းများနှင့်ကြီးမားတဲ့ knockers၊သင်ရှိသည်ဖို့တာပေါ့အတော်လေးကြယ်၏အချိန်မှန်၏။ ဒါကြောင့်၊စိတျထဲမှာအတူ၊ကုန်အံ့ရဲ့စီးပွားရေးမှဆင်းပြီးသွားမယ့်ဘာကိုမြင်နိုင်အပေါ်၊ကြှနျုပျတို့လုပျပေးရမညျလား?
စတင်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်သောနေ့ရက်:တစ်ဦးဇာတ်ကောင်အစပိုင်းတွင်ပဋိသန္ဓေအတွက် shitty လှပတဲ့ဂိမ်းကျနော်တို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခါ APS တင္ထုတ္လုပ္သည္။ ကျနော်တို့ချစ်၏စိတ်ကူးကိုမိန်းမနဲ့သူမ၏ကြီးမားသော knockers၊ဒါပေမယ့်အချို့သောအချိန်ယူပြီးနည်းမှန်လမ်းမှန်ကိုရှာပါမိတ်ဆက်ဖို့သူမကိုအပြည့်အဝ-စုံတဲ့ခေါင်းစဉ်အကြောင်းရှိသည်မယ်လို့အ coomers cumming နှင့်အ doomers လိုသူတို့ဘယ်လိုသိထားကစားရန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအွန်လိုင်း။ လူများကပျော်စရာ-မေတ္တာရှင်မလေးကြီးတဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကအလွန်ခက်ခဲကြောင့်ပယ်ရေဟောင်းကိုမှသို့မဟုတ်အနှောင်:သူမသည်ကြက်များအတွက်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နှင့်သတင်းကောင်းအကြောင်းသင်ဖြစ်ပျက်ရန်ရှိသည်!, ကျနော်တို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းရတယ်တြက္ဆူ busty နတ်ဖုရားသောကြောင့်ဤ tits နေသောလူသတ်သမားနှင့်သင်ချင်တာပေါ့ကြည့်ဖို့သူတို့ကိုချက်ချင်းမရလျှင်တစ်နေ့သောအခါ၊သင်ဝန်တက်ဂိမ်း။ ပြုမှတ်ချက်အတွက်အရှိသည်စွမ်းဖို့သင်တို့အဘို့အကောက်ကနေ ၅ အရွယ်အမျိုးမျိုး၏tit၊၄ အရာတော်တော် bonkers–၁၏အရာ'စံ'၊ချင်သောသူတို့အဘို့နှင့်အတူကစားရန်သာမန်မိန်းကလေး(သမျှကိုအကြောင်းပြချက်အဘို့)။, ထိုအင်ဂျင်မှာမိန်းမကြီးမားသော Tits လည်းရည်ရွယ်ကျယ်ပြန့်မျက်နှာကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းရူပဗေဒဆိုတာအဲ tits ပြန်တက်အရပျလုံးကျော်ဖြစ်သူမ၏ပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော။ မိန်းမငယ်သည်အကြီးအကျယ်နှာနှင့်အတူကျော် ၄၀၊၀၀၀ စကားလုံးအတွက်ခေါင်းစဉ်ရှိခြင်း၊အနည်းငယ်အလိုဆန္ဒများကိုဖတ်ရှုဖို့သွားဖို့အတွက်ကူညီသင့်ရဲ့စွမ်းဒီဂိမ်းခံစားဖို့။ နိုင်ကျော်အဆြးေႏြးေသင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စဉ်းစားသောမိန်းမရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွယ်ရှိစေသည်မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးအလုပ်!
စဉ်တွေအများကြီးကားထွက်ရှိရှိရှုပ်ထွေးသောကွက်နှင့် storylines တူျဖင့္ဒန်နှင့်ဒါ-အပေါ်၊ကျနော်တို့သေချာအောင်လုပ်ချင်သောမိန်းမကြီးမားသော Tits ပဲဂန္ညမ်းနှင့်အတူဂိမ်းတစ်ခုခေတ်သစ်ခံစားရ။ အကြောင်းရင်းနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမှာကိုမင်းလူများက:ဒါနှင့်ရှိသမျှသောင့်။ သင်ကရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်မှတဆင့်ခုန်တန့်၊အထူးအပစ္စည်းများကိုအခြားသူသို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှဖို့အမိန့်အတွက်အောင်မြင်သင်တို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်။ ကိုယ့်အနည်းငယ်ဂိမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရလဒ်ကို၊ဖြစ်နိုင်ဖို့သွားရပြီးညစ်ပတ်နှင့်အတူ။, အမှုအရာဖြစ်စေခြင်းနှင့်အတူပယ်စတင်အနည်းငယ်အလင်းအနမ်းနဲ့ထိ၊သို့သော်အဆိုပါဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမကြာမီဖြစ်လိမ့်မည် amped တက်လိမ့်မယ်ဘောလုံးနက်ရှိုင်းအတွက်ဒီကျယ်ပြန့်အလွန်လျင်မြန်စွာအမှန်ပင်။ ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူကျွန်ုပ်တို့အတွက်လိင်အင်ဂျင်နဲ့ကံအကောင်းဆုံးတစျခုကစျေးကွက်အပေါ်အခုအချိန်မှာ–အပေါ်ပိုပြီးအကြာတွင်! ငါတို့သည်မြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းလူတိုင်းဘယ်သူကစားမိန်းမကြီးမားသော Tits အကြိုက်ကြောင့်ဤမျှလောက်သောသူတို့သည်အချိန်နှင့်အချိန်ပျော်မွေ့မှတဖန်ကတူညီတဲ့ရှုထောင့်ကနေ။ ပါကသင်၏တိုးတက်မှုသည်လည်းကယ်တင်ဖို့အတိမ်၊ဒါကြောင့်မည်သည့်အချိန်တွင်သင်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ဓလေ့အနည်းငယ်ပျော်မွေ့ရန်သက်သက်လိင်ပျော်မွေ့နှင့်အတူဆက်စပ်မိန်းမ။, ထိအဓိကနူးခလုတ်နဲ့သင်ချက်ချင်းသတိပေးမည်သည့်ယခင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနောက်တဖန်–ထင်ပါတယ်!
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့၊ကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်ကြောင်းလိင်ဖစ္ၿ၌မိန်းမကြီးမားသော Tits အကောင်းဆုံး။ ဒါဟာသင်ပေးသည်ကြီးထိန်းချုပ်ရေးနှင့်တန်ခိုးအကျော်အရာကိုရဲ့ဖြစ်ပျက်သောသင်တို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်တူလိင်ဂိမ္းဘုရားသခင်! ပြော ၄၀ ထူးခြားရာထူး၊ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းသင်၏လက်ကိုတည်နေရာ၊နောက်ခံအရောင်ရွေးချယ်ရာတွင်၊အလင်းထိန်းချုပ်ရေး၊ပြင်းထန်သတိထားပါ။ အဲဒါကြီးအပေါ်သွားဒီနေရာမှာသင်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နှင့်အတူရုန်းကန်အတိအကျသိဖို့ဘယ်လောက်ထွက်အများဆုံးရရန် AHT–ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့၊သင်ရရှိပါသည်ဖို့အချိန်များများလေ့လာသင်ယူ!, အကြီးအရာမိန်းမကြီးမားသော Tits အကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လျှောက်သွားဖြစ်စဉ်ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခြေလှမ်းနှင့်အခါသင်နောက်ဆုံးတွင်အဆင်သင့်အရေးယူထိန်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်၊နှင့်သင်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ကျော်မိန်းမနဲ့ဘယ်လိုမှမင်း။။။။ ကျနော်တို့မျှော်လင့်သင်သည်ဤမွေ့လျော်လိင်ဖစ္ၿကြောင့်၏အဓိကရှုထောင့်နှင့်ဒြပ်စင်၏ညမ်းဂိမ်း! ကျနော်တို့ဖြစ်နိုင်မားတဲ့အမှားလုပ်တယ်ဆိုရင်မေတ္တာရှင်မဟုတ်၊ဒါကြောင့်အင်း:လက်ချောင်းကိုဖြတ်ကူး? အဘယ်သူသည်ငါတို့ကြိုးစားနေအရူးဖို့–သင်သွားတစ်ပေါက်ကွဲမှုများ(နှင့်အသင်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တက်အဆုံးသတ်မွဲလွန်း!)။
ကျော်နှင့်အတူ ၅၀ ပို့စ်များအပေါ်တစ်ဦးနေ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုရမ်နှင့်တစ်ဖက်ဆာဗာနှင့်အတူ ၆၊၀၀၀+အဖွဲ့ဝင်များ၊သင်ဘယ်တော့မှဖြစ်လွန်းဝေးကွာမှလူများကအကြောင်းပြောနေတာနှင့်အတူအခြားပရိသတ်များ။ ကျနော်တို့ကဆောက်လုပ်ဖို့အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်အခြေခံပြီးဒီကျယ်ပြန့်နှင့်ကမယုံသို့မဟုတ်မဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ဟာအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်အပေါ်နောက်ဆက်တွဲကျွန်မတို့လူတိုင်းမြတ်နိုးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဖြစ်မသွားမယ့်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောဆောင်ပုဒ်များအတွက်စတူဒီယို၊ဒါပေမယ့်အပေါ်အခြေခံပြီးကနဦးအနေဖြင့်တုံ့ပြန်ချက်ပုံမှန်အဖိုရမ်များအပေါ်၊ကျွန်တော်တို့ရိုက်လက်ျာအစက်အပြောက်! ယခုတော့:အဘယ်ကြောင့်မလာပေါ်၌ကိုယ်နှင့်ထွက်ကြိုးစားကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်၊ကမ္ဘာ့အဆင့်မီလိင်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်? သင်သိရန်ချင်တယ်၊ဒါကြောင့်လုပ်သာလုပ်ပါ! လာမယ့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်အားဖြင့်နှင့်ပျော်မွေ့!